“Nasiibka ayaa naga hiiliyay, Atletico Madrid way u qalantay guushii ay gaartay” – Tababare Valverde – Gool FM
“Nasiibka ayaa naga hiiliyay, Atletico Madrid way u qalantay guushii ay gaartay” – Tababare Valverde
Dajiye January 10, 2020
(Saudi Arabia) 10 Jan 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa sheegay in kooxdiisa inta badan ay aad u gacan sareysay inta lagu gudi jiray ciyaartii xalay ay la ciyaareen Atletico Madrid.
Atletico Madrid ayaa guul soo laabasha ah kaga gaartay kooxda Barcelona kulanka wareega afar dhamaadka ee koobka Spanish Super Cup, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-3, waxay kulanka finalka balan kaga sameysteen kooxda ay isku magaalada yihiin ee Real Madrid.
Ernesto Valverde ayaa kaddib ciyaarta wuxuu kala hadlay warbaahinta sida uu yahay dareenkiisa kaddib guuldarrada ay kala kulmeen kooxda Atletico Madrid wuxuuna yiri:
“Waxaan xakameynay inta ugu badan ee ciyaarta, balse nasiib uma yeelanin inaan ka faa’ideysano fursadihii aan abuurnay, waana ku guuldareysanay ciyaarta”.
“Waxaan la yaabay goolkii hore oo ay Atlético Madrid naga dhalisay, waxaan isku daynay inaan ku soo laabano natiijada ciyaarta, waxaan dhalinay goolal balse qalabka muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR ayaa meesha ka saaray”.
Intaas kaddib tababare Ernesto Valverde ayaa wuxuu xaqiijiyay in guuldarada ka soo gaartay Barcelona koobka Spanish Super Cup, aysan wax saameyn ah kaga yeelan doonin Barca horyaalka La Liga ee dalka Spain wuxuuna yiri:
“Xirfadeena horyaalka waa mid fiican, waxaana rajeynayaa in taageerayaasha ay ku raaxeysan doonaan final weyn ee u dhaxeyn doona kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid”.
Simeone oo ka hadlay guushii ay xalay ka gaareen Barcelona… Muxuuse ka yiri kulanka Finalka ee Madrid Derby?
Tababare Pep Guardiola oo arrintan carro weyn kaga muujiyay xiddigaha kooxdiisa Man City